Rabshado ka dhashay wadaad Hindu ah oo maxkamad ku heshay kufsi - BBC News Somali
Rabshado ka dhashay wadaad Hindu ah oo maxkamad ku heshay kufsi
Image caption Gurmeer Ram Rahim Singh waxa uu jilaa aflaamta
Illaa 12 qof ayaa ku dhimatay rabshado ka dhashay banaan baxyo ay dhigeen dad taageersan wadaad Hindu ah oo ay maxkamad ay ku heshey in uu kufsaday labo dumar ah.
Dadka dhintey ayaa ka mid ah taageerayaasha iyo xerta wadaadkan oo lagu magacaabo Gurmeer Ram Rahim Singh, kuwaasi oo banaanbaxyo rabshado wata ka dhigay magaalada Panchkula ee gobolka Punjab ee dalka Hindiya.
Warar waxa ay intaasi ku darayaan in labo xarun oo tareenada ah dab la qabadsiiyey, iyada oo sidoo kale boob baahsan loo geystey ganacsiyada magaalada.
Wadaadkan oo sheegta in uu leeyahay malaayiin dad ah oo taabacsan adduunka oo dhan ayaa lagu heley in uu kufsaday labo dumar ah sannadkii 2002-dii isaga oo markaas ku sugnaa macbad uu leeyahay oo xarun u ah.
Kumanaan booliiska iyo militariga ayaa lagu daadiyey magaalada, waxayna dowladda sheegtay in xaalada ay degentahay hadda.
Rabshadaha ayaa sidoo kale ku fidey magaalada caasimadda ah ee Dehli halkaasi oo tareeno dab la qabadsiiyay.
Maxkamadda ayaa la filayaa in xukunka ciqaabta ah ay ku fuliso maalinta isniinta ee soo socota, waxaana hadda ninkan gacanta ku haya ciidamada militariga.
Waa kuma Gurmeet Ram Rahim Singh ?
Waa hoggaamiyaha koox diimeed lagu magacaabo Sera Sacha Sauda oo sheegata in ay leedahay illaa 60 milyan oo qof oo taabacsan adduunka dhan.
Hoggaanka kooxdan ayuu qabtay isaga oo 23 jir ah.
Waxa uu dhigaa ruwaayado waaweyn, aflaamta ayuu jilaa, xitaa wuxuu leeyahay shirkad cuntada ah oo isaga u gaar ah.
Waxa uu isku magacaabaa xiddiga caanka ah, wuxuuna xirnaa dhar xariir ah oo aad qaali u ah
Waxaa lagu eedeeyey in uu magac diley wadaadada kale ee Hinduuga ah.
Waxaa horey loogu sameeyey baaritaano la xiriira dil iyo kufsi
Waxaa lagu eedeeyey in dadka raacsan qaarkood uu ku qanciyey in ay xininyaha iska siibaan ama is dhufaanaan, isaga oo u sheegey in taas ay illaahay ugu dhawaanayaan.
Wasiirka koowaad ee gobolka Punjab Amarinder Singh ayaa ku eedeeyey dhiggiisa gobolka dariska la ah ee Haryana in uu hor istaagi waayay in dad badan oo gobolkiisa ka yimid ay usoo safraan magaalada Chandigarh.
Lahaanshaha sawirka MANOJ DHAKA
Image caption Taageerayaasha wadaadka ayaa rabshado sameeyey
Magaalada Chandigarh ayaa caasimad u ah labada gobol, waxaana hadda la xirey xuduuda labada gobol.
Wadaadka ayaa markii uu maxkamadda imanayay waxa uu la socday kolonyo baabuur ah oo ka badan 100 gaari.
Iskuulaadka iyo xafiisyada dowladda iyo xitaa boosteejooyinka tareenka ayaa gabi ahaanba xiran, iyada oo magaalooyin lagu soo rogey Bandow.
Shineemooyinka Hindiya oo lagu amray inay shidaan heesta calanka
Daaw: Tareenka Hindiya ee la dagaalamo kaneecada